Home News Wasaaradda waxbarashada XFS oo la soo wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla...
Wasaaradda waxbarashada XFS oo la soo wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir “Sawirro”
Munaasabad ku saabsan Ololaha dib usoo nooleynta waxbarashadda dadweynaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyaddoo Munaasabaddaasi Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliy kula wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir.
Munaasabaddan ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo, wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre, wasiir ku-xiggeenka wasaaradda waxbarashada Feysal Cumar Guuleed, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxman Maxamuud Cabdulle, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xassan Maxamed Cali, xubno ka socda bahda waxbarashada, iyo marti sharaf kale.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in maanta wasaaradda ay ku guuleystay inay la soo wareegto 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir, islamarkana maanta wixii ka dambeeya wasaaradda ay qaadeyso masuuliyadooda.
“Maanta waxaan ku guuleysanay inaan la soo wareegno 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir, maanta wixii ka dambeeya, waxaa masuuliyadooda qaadeysa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya” ayuu yiri wasiir goodax
Wasiirka Waxbarashadda XFS ayaa tilmaamay in marna aan la iloobi doonin doorkii dalladaha waxbarashada ay ka soo qaateen intii lagu guda jiray bur burka horumarinta waxbarashada.
Iskuullada maanta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ay la wareegay ayaa kala ah Kaaraan, Godey, Cabdi casiis, Gaashaanle, 11 janaayo, Bartamaha, Wiil waal, Bartanaha, Yaasiin cismaan, Agoonta Boondheere, Maxamuud mire, Hanti wadaag, Howlawadaag, Xasan khaliidi, Cali xuseen, Jabuuti, Deyniile, Maxamuud Hilowle, Axmed waayeel, Ex aqoon darsed, 21 November, 20 December, Agoonta wiilasha kaaran, iyo Macalin jaamac.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladda ay ahmiyada koowaad siineyso horumarinta waxbarashada.
“Ahmiyadda koowaad waxaa noo ah horumarinta waxbarashada, manhajka waxbarashada waa in lagu soo daraa wadaniyadda, iyo muhiimada uu lee yahay qofka “ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa ardeyda ku sugneyd munaasabada guddoonsiyay Buugaag ay ku qoran yihiin manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo markuu ahaa siyaasiga xanaaqsan iyo maanta (Daawo)
Next articleMadaxweynaha jubaland oo ka codsaday dalka Kenya in dib loo furo Xadka Kenya iyo Somaliya ay wadaagaan
Doorashadda Koonfur Galbeed oo laga Cabsi qabo in ay dib u...